Ravalomanana: Aleoko miala tsy ho filohampirenena... | Hevitra MPANOHARIANA
Ravalomanana: Aleoko miala tsy ho filohampirenena...
2008-08-21 @ 08:05 in Finoana
Nihazakazaka mihitsy aho hanoratra ity na dia hiserana ihany aza. Ataoko fa karazany tsy nampoizin'ny maro ihany ny nahalany ny filoham-pirenena Ravalomanana ho filoha lefitry ny FJKM indray. Izaho kosa efa tsy gaga intsony fa efa nilazana tsinona ka niandry ny fidonany fotsiny. Tsy nosoratako mialoha anefa izy ity fa nisy namana vitsivitsy nilazako azy ambava ihany.
Fotoana vitsivitsy lasa izay, tsy hiteny aho hoe andro vitsivitsy, na herinandro vitsivitsy, na volana vitsivitsy na taona vitsivitsy fa izay fotoana vitsivitsy tsy voafaritra mazava izay no ambarako. Nisy olona vitsivitsy ao anaty ny rafitry ny FJKM niangavy ny filoham-pirenena ankehitriny tsy hirotsaka hofidiana ho filoha lefitry ny FJKM intsony fa manjary manaratsy toerana ny FJKM ho mifamatotra loatra amin'ny fitondrana, ary manimba ny fitoriana ny Filazantsara, ny mbola fitoerany eo ihany. Tsotra ny navalin'ny filoha: Aleoko miala tsy ho filohampirenena toy izay tsy hirotsaka ho filoha lefitry ny FJKM. Tsy nahateny intsony ireo mpikambana vitsivitsy ao anatin'ny rafi-piangonana FJKM ireo.
Koa nahoana ary no fifaninanana Minisitra taloha sy amperinassa no heno omaly? Tsotra ny antony: Tarafin'ny filoham-pirenena mialoha ny safidin'ny mpizaika mahazo mifidy tamin'ny nametrahany ireo minisitra mirahalahy hifaninana amin'ilay minisitra noesorin-dRavalomanana. Manana mpanara-maso azy manokana mampita vaovao izy ka rehefa tsinjony fa mbola malalaka ny lalana dia asainy miala tsy hifaninana ny Minisitra Hajanirina Razafinjatovo sy ny Minisitra Ivohasina Razafimahefa ka izy indray no mirotsaka.Hain'ny filohampirenena tsara ny fomba fifidianana ka nampiasainy tokoa.
Toerana mbola heveriny ho andry iray lehibe hahalany azy ho filoham-pirenena amin'ny fifidianana manaraka io toerana io ka tsy hamelany mihitsy.